Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Mpitondra mpitari-bato vilam-bava
INTY SY NDAY: Mpitondra mpitari-bato vilam-bava
Mbola raharaha iantefan’ny sain’ny maro ary ihetsiketsehan’ny mpitondra fanjakana fatratra, ilalaovany ny fianakaviambe iraisampirenena sy ny malala-tanana isany avy any ivelany ny manodidina ny aretina pesta.
Tao anatin’izay volana vitsy nampahalaza an’ity raharaha pesta ity io zay koa dia isan’ny nireharehan’ny fitondram-panjakana ny fahatsiarovan-tenan’ireo tanora (amin’ny ankapobeny) izay nanolo-tena nilatsaka an-tsitrapo ho isan’ny fitaovana hikarakara ny olona tratry ny aretina pesta na hanentana amin’ny fitandroana tsy ho voan’io areti-mandoza io sy ny manodidina izany. An-jatony izy ireo ary niparitaka amin’ny faritra maro manerana ny Nosy.
Dia nosokajian’ny fitondram-panjakana ho toy ny fitaovana sy kojakoja tokoa ve ka tsy nasiany lanja sy hasina nefa olombelona izy ireo ?
Tsy mba nisitraka an’izay farafahakeliny antoka hananan’izy ireo fahavitrihana hiantsoroka ny andraikitra mantsy izy ireo, na sakafo hanohanana aina aza, fa dia jeren’ny fitondram-panjakana fotsiny. Satria tokoa ve tsy noterena na novozonana fa « nilatsaka an-tsitra-po » ?
Mba samia kosa mandinika amin’ny saina tony fa misy fanampiana avy amin’ny fianakaviambe iraisampirenena hiadiana amin’io pesta io, ankoatry ny vola natokan’ny vahoaka ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana e ! Dia iza ihany izany no nahazo fanampiana sy nokarakaraina tamin’izy ireny raha ireo mpilatsaka an-tsitrapo mba mila fanohanana ara-batana sy ara-tsaina aza tsy mba nomena ny sahaza azy ?
Amin’izao fotoana, nifarana ny fe-potoana voafaritra fa nandefasana azy ireny any amin’ny faritra any. Tsy fantatra ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana fa teny boribory ho fandrarana azy ireny tsy hihetsika any no asetry azy ireny.
Ny minisitry ny fahasalamana ve izao anefa, ohatra, raha mandeha hitsidika ny Hopitalin’Ambohimiandra izay isan’ny itsaboana an’ireo voan’ny pesta eto Antananarivo, dia efa nampiseho finiavana fa ny vola tany antsikinany, volany madiodio, no niantohany ny solika nandehanana teny Ambohimiandra ? Raha hanao « eny » amin’izany izy ve dia ho azo inoana ? Ka nahoana no jerem-potsiny sy latsaina aza ireo mpilatsaka an-tsitrapo fa tsy omena azy ny fankaherezana sy ny fanoitran’ny fahavitrihana eo ampiatrehany ny asany ?
Aza manao vain-drahalahy tsy mba marary re ry zalahy fa fantatra ihany ange ny kimaizimaizina ataonareo ho amin’ny tombon tsoanareo manokana momba io aretina pesta io e ! Na ny « tsena » momba ny fanakonam-bava (cache bouche) ihany aza dia fantatra ny hoe « ohatrinona ny nambara fa masonkarena nividianana azy io tany ambadika tany » ? Dia rariny ve raha sahin’ny sasany ny milaza fa 3.000 ariary ny sandsam-bidin’ny iray amin’izy io ? Ny fanafody hafa sy kojakoja hafa tsy tenenina intsony.
Dia vahoaka iza no hanaiky hofetsifetsenareo isanandro eto e ? Olom-pirenena iza no hangina amin’ny fanambakana isanandro ataonareo eto amin’ny alalan’ny fampiasana ny fahefam-panjakana ?
Aza mifampivarotra sakabe loha eto fa mifankahita isanandro eto ange isika ka mifankahafantatra zavatra atao e !
Mba jereo ireo mpilatsaka an-tsitra-po ireo fa aza ampijaliana toa izao re !